Kusukela ekuqaleni, inkampani yethu isisusele phezu kwecebo lokuqalisa indawo ephezulu nesikhundla esiphakeme.
Sizibophezele ezinhlelweni zokugxila kubantu, ukusekela ukuthembeka nekhwalithi njengembombo, sithathe isikhundla esiphambili ngokuqamba izinto ezintsha.
Inkampani yethu ikhethekile ekwenzeni indwangu ye-lace, indwangu ye-mesh, indwangu yokuphrinta, i-embroidery nokunye. Sithola ukuthandwa kumakhasimende ngesitayela esiyingqayizivele nemiklamo yefashini, ikhwalithi eqinile.
Inkampani yethu iqala ukugcwala eminyakeni eminingana ngamasu amasha, izimpahla zethu zithandwa kakhulu ezimakethe zasekhaya nezaphesheya.
Akunandaba nokuqamba, ukwakheka, imibala, i-ruifa ifuna ukuba ngowokuqala, isitayela se-ruifa sengeze izinto zezemfashini. "Ukuthembela okusezingeni eliphakeme, ukwethenjwa okukhulu, iklayenti kuqala" isiqubulo se-ruifa.
Senza imizamo yokuqamba amacebo amasha, sithuthukise ikhwalithi yamabhizinisi ukuze siphishekele ikhwalithi engcono. Sizohlangana nezandla nekhasimende lethu ukuvula ikusasa eliqhakazile emakethe enjalo ebabazekayo.
Imikhiqizo / Isevisi:
Izindwangu Zokuhlobisa , Indwangu Yezintambo , I-Lace Trim , I-Lace Material , I-French Lace , Izindwangu zeJacquard
I-Capital (Million US $):
Isikhathi Sesikhathi Sokuhola:
I-Annual Sales Volume (Million US $):
I-Volume Yokuthenga Yonyaka (Million US $):
Imodi yokungenisa nokuthumela:
Yiba neLayisense Yokuthumela Ngaphandle
Ayikho Imikhiqizo Yokukhiqiza :
No. ye-QC Abasebenzi :
Amasevisi we-OEM anikeziwe :
Usayizi we Factory (Sq.meters) :
Indawo ye-Factory :
Umakhala ekhukhwini :
Izwe / Isifunda :